Tiknoolajiyadda | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Teknolojiyaddu waxay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah baridda iyo u diyaarinta ardaydeena mustaqbalka.
Degmadeena, teknolojiyada waxay bedeshay habka macalimiinta wax u baraan iyo caruurtu wax u bartaan. Ardayda aad ayey ugu mashquulsan yihiin, iyo gaaritaanka ardayda ayaa u kordhay heerar rikoor jabis ah. Dhammaan ardaydeena ku jira fasallada K-12 waxay isticmaalaan ipad laga soo saaray iskuulka si ay u helaan agabka dhijitaalka ah ayna kobciyaan iskaashiga iyo xirfadaha abuurista. Waxay sidoo kale helayaan waxbarid shaqsiyeed oo ku saabsan dhammaan maadooyinka, iyada oo ujeedadu tahay kor u qaadista iyo shakhsi ahaanshaha barashada ardayda.
Minnetonka wuxuu bilaabay inuu dijital ka dhigo manhajkiisa 2002 isagoo ku rakibaya Guddiyadiisii ugu horreeyay ee SMART. Maanta, fasallada oo dhami waxay leeyihiin Guddiyada SMART, oo u oggolaanaya macallimiinta inay keenaan adduun ka mid ah ilaha internetka ee fasalka iyagoo ku socda xawaare sare iyadoo ay ugu wacan tahay shabakadeena fidsan ee loo yaqaan 'fiber optic network', goobo badan oo laga helo WiFi, iyo qalab deg deg ah oo aamin ah. Xawaarahaasi wuxuu hubiyaa in waqtiga waxbarida ee qaaliga ah aan lumin.
Xalka maqalka dhawaqa ee fasal kasta wuxuu ilaaliyaa dhawaaqa dhawaaqa macalimiinta, wuxuu yareeyaa culeyska codka wuxuuna u ogolaadaa arday walba inuu maqlo macalimiintooda sidii inuu isagu ama iyadu ay fadhiyaan safka hore.
Macalimiinta waxaa loo tababaray sida teknolojiyadda loogu isticmaali karo fasaladooda oo loo tolay manhajka si loo kordhiyo kaqeybgalka ardayda ee waxbarashada. Minnetonka kuma tiirsana barnaamijyada dhinac saddexaad si loo baro maadooyinka. Macallimiinteennu waxay adeegsadaan manhajka digitalka ee Minnetonka.
Fahamka iyo u siinta macnaha qoraalka adag ee Ingiriisiga way ku adkaan kartaa ardayda. Casharrada isku dhafan tikniyoolajiyadda, oo loogu talagalay in lagu kala bixiyo fekerka ardayda, ayaa ka gudbi kara tan. Ardayda waxay u badan tahay inay sahamiyaan tarjumaadaha suuragalka ah markay isticmaalayaan ilaha iskaashiga marka loo eego sida ay ku noqon lahaayeen deegaan go'doon ah. Iyada oo Ipad-yada, Internetka, Google Docs, Schoology, iyo waxyaabo badan oo farahooda ah, ardaydu waxay fikradaha la wadaagi karaan ardayda fasalka la dhigata, waxay helayaan macallinka deg-degga ah ama jawaab-celinta asaaggooda ah, waxayna ka dhigayaan waxyaabaha ay baranayaan inay iyagu leeyihiin
Awoodda iPad-ka ee in badan oo si hufan u maamusha qiimeynta foomka (tijaabooyinka ka hor) iyo jawaab celinta kale ee ardayda waxay ka caawisay macallimiinta inay shaqsiyan barashada. Kahor 1: 1 Ipadka, macallimiintu waxay ku tiirsanaayeen su'aalo ama waxyaabo kale oo waraaqo ah, taas oo macnaheedu ahaa jawaab celin macno badan ayaa dib loo dhigay maalin ama in ka badan. Hadda, waxay bixin karaan jawaab celin kahor, inta lagu jiro iyo kadib fasalka iyo kedisyada isla markiiba waa la qiimeyn karaa loona isticmaali karaa in lagu wargeliyo waxbarista maalintaas ama maalinta xigta. Macallimiinta Minnetonka waxay si joogto ah u helayaan habab cusub oo hal abuur leh si ay ardayda u siiyaan jawaab celin ka dhakhso badan kana waxtar badan qiimeynta ku saleysan warqadda. Hadday tahay Foomamka Google, Socrative, Flipgrid, Padlet, Kahoot, Schoology, ama TurnItIn, macallimiinta Minnetonka ayaa ururin kara jawaab celin-waqtiga-dhabta ah oo ku saabsan fahamka ardayga ka dibna u habeyn kara tilmaamaha maalintaas iyo wixii ka dambeeya iyadoo lagu saleynayo jawaab celintaas.
Dhammaan codadka ardayda waa la maqli karaa laguna xisaabtami karaa iyadoo la adeegsanayo qaab elektiroonig ah, sidoo kale. Marka loo barbardhigo habka dhaqameed ee ah in ardaydu gacmahooda kor u qaadaan si ay u hadlaan oo kaliya ay maqlaan hal ama laba shaqsi, xisaabtanka kordhay ee la dul dhigay arday kasta iyo aqoonta uu ka helayo macallinka arday kasta ama ardaydeeda ayaa ah mid aad u qiimo badan.
Xidhiidhada la xidhiidha
Tonka Coders iyo Sameeyayaal